आक्रोसित हुँदै धमला पत्नी भन्छिन् “नव कलाकारलाई स्वागत गर्ने शैली यही हो” ? - Everest Media News
Home मनोरञ्जन आक्रोसित हुँदै धमला पत्नी भन्छिन् “नव कलाकारलाई स्वागत गर्ने शैली यही हो” ?
आक्रोसित हुँदै धमला पत्नी भन्छिन् “नव कलाकारलाई स्वागत गर्ने शैली यही हो” ?
करिब १ करोडको लगानी गर्दे फिल्म अनुरागबाट चर्चित पत्रकार ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले सिनेमा क्षेत्रमा डेब्यु गरिन् । दुई सन्तानकी आमा भएपछि निकै हिम्मत गरेर यस क्षेत्रमा आएकी एलिजाले निकै प्रशंसा पनि बटुलिन् तर बिडम्बना उनको डेब्यु सुखद रहन सकेन । “कान्छा दाई गाना बजाइदेउन” र “यस्तो साथी तिम्रो” बोलका दुई वटा गीतको चर्चा र सफलतापछि फिल्मले दर्शक पाउँने अपेक्षा गरिएको थियो तर भने जस्तो हुन सकेन । हालै अनुरागको बिषेश शोमा बिशिष्ट व्यक्तिहरुले अनुराग हेरे ।
मन्त्रीदेखि फिल्मीकर्मीहरुले फिल्ममा प्रस्तुत भएको कथाको निकै प्रशंसा गरे । कतिले फिल्ममा निर्देशकिय पक्ष केही कमजोर पाएको प्रतिक्रिया दिए । हरिबंश आचार्यदेखि भुवन केसीसम्मले एलिजाको प्रयासको प्रशंसा गरे पनि डेब्यु नायक समुन्द्र पण्डितले गरेको कामको खुलेर प्रशंसाका पुलहरु बाधे ।
राम्रो फिल्म छानेको खण्डमा समुन्द्र ले यस क्षेत्रमा आफनो इमेज बनाउँन सक्ने दाबी गरे । सबैको प्रशंसाबाट खुसी भएकी एलिजा आक्रोसित हुँदै नब कलाकारहरुको स्वागत राम्रोसंग भएको भन्दै व्यङग्य हानिन् ।
उनले केही निरास र आक्रोसित हुँदै भनिन् “हामीलाई बितरकबाट निकै धोका भयो । उहाँहरुले नयाँ कलाकार , नयाँ व्यानर र निर्देशकको फिल्म के चल्ला र भन्दै हाम्रो पोस्टर पनि लगाईदिनु भएन । हलमा सानो व्यानर छ त्यो देखेर को फिल्म हेर्न जाने” ? पत्रकारहरुसंग बोल्दै गर्दा उनको असन्तुष्टी प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
“हाम्रो फिल्म वाउ नहोला तर के नयाँ कलाकारहरुलाई स्वागत गर्ने तरिका यही हो” ? उनले प्रतिप्रश्न गरिन् । उनी अगाडी थप्छिन् “जे होस नयाँ कलाकारको राम्रैसंग वेलकम भएको छ” । उता ऋषि धमलाले पनि फिल्म वितरकहरुले राजनिती गरेर आफनो फिलमलाई हल नदिएको आरोप लगाएक छन् । अनुरागमा सरोज खनाल , रुपा राना , राजाराम पौडेल , शिशिर राना मोहोन निरौला बिस्व बस्नेत, कमल कान्त मैनाली लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। फिल्ममा भारत गौतम र गीत भेटवालको लगानी रहेको छ। फिल्मलाई सत्यराज चौलागाईंले निर्देशन गरेका छन् ।
‘मणिकर्णिका’को टिजरमा यस्तो खतरनाक शैलीमा देखिइन् कंगना हेर्नुहोस भिडियो …
नायिका वर्षा र नायक जीवनको ‘तारा खसेछ’ सार्वजनिक (भिडियो सहित )